लाइनमा बसेर पैसा डिपोजिट गर्नु नपर्ने , नबिल बैंकले ल्यायो नबिल क्यास मसिन ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / लाइनमा बसेर पैसा डिपोजिट गर्नु नपर्ने , नबिल बैंकले ल्यायो नबिल क्यास मसिन !
लाइनमा बसेर पैसा डिपोजिट गर्नु नपर्ने , नबिल बैंकले ल्यायो नबिल क्यास मसिन !
admin August 20, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 21 Views
नबिल बैंकले लाइनमा बसेर पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ। जसरी पहिले एटीएम नहुँदा हामी पैसा झिक्न बैंकमा घण्टौं लाइनमा बस्थ्यौं ठिक त्यसरी नै अहिले पैसा डिपोजिट गर्न लाइन बस्नुपर्छ।
नबिल बैंकले नबिल क्यास मेशिन जारी गरेको छ । आधुनिक बैंकिङ युगको सुरुवात गर्ने तर्पm केन्द्रित हु“दै यस नबिलको क्यास मेशिनले ग्राहकहरुलाई एटिएम मार्पmत रकम झिक्ने मात्र नभई रकम जम्मा पनि गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ । यस प्रविधी नबिल बैंकले सुरुवातमा नबिल बैंकको तीनधारा शाखा र पुल्चोक शाखाबाट सुरु गरेको छ ।
अब ग्राहकहरुले मेशिनमा एक हजार, ५ सय, १ सयको नेपाली रुपैया“ जम्मा गर्न सक्ने छन् भने एक पटकमा ९९ हजार ९०० जम्मा गर्न सक्ने छन् । साथै यस मार्पmत नबिलको कुनै पनि बचत र चाल्ती खातामा जम्मा गर्न सक्ने छन् । साथै यस् मार्पmत ग्राहकहरुले आफ्नो क्रेडिट कार्ड भुक्तानी पनि गर्न सक्ने छन् ।
बैंकले देशभर १३५ वटा शाखा कार्यलयहरु, १८४ एटिएम र १५०० भन्दा धेरै नबिल रेमिट एजेन्टहरु मार्फत सेवा दिदै आएको छ । नबिल बैंकले फेसबुक पेजमा यस विषयमा जानकारी दिएको छ। बैंकले एउटा भिडिओ सार्वजनिक गरेको छ जहाँ हामीले हाम्रो एटीएम नबिल क्यास मसिनमा प्रयोग गर्नसक्छौं।
त्यसपछि दिइएको जानकारी पछ्याउँदै हामीले पैसा डिपोजिट गर्ने भाडोमा पैसा राख्नसक्छौं। मेसिनले पैसा भित्र राख्छ र डिपोजिट भएको रसिद पनि दिन्छ। कुनै पैसा भने मेसिनले नपढ्नसक्छ। त्यस्तो पैसा मेसिनले हामीलाई नै फिर्ता दिन्छ।
Previous नेपालकी छोरी हुँ म’ भन्दै सबैलाई नचाउने इण्डियन आइडलका प्रतियोगी पवनदीपकी बहिनी ज्योति (भिडियो)
Next ट्याक्सी चालक’की छो’री अस्मिताले पाइन विश्वको म हङ्गो स्कुलमा पढ्ने मौका